“ Front and Centre” Live Performance ကို Ultra HD နှင့် HDR တွင် Blackmagic Design ဖြင့်ပေးပို့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ "တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ" က Ultra HD မှာပို့ပြီးတိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် HDR
Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ "တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ" က Ultra HD မှာပို့ပြီးတိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် HDR
Fremont, CA - သြဂုတ်လ 13, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးရုပ်မြင်သံကြားဖျော်ဖြေပွဲစီးရီး "တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ" အပြည့်အဝအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း က Ultra HD တိုက်ရိုက်လွှ Facebook မှတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်အများပြည်သူရုပ်မြင်သံကြားနှင့် DIRECTV များအတွက် HDR10 များအတွက် SDR အတွက်ကိုအပ်ခဲ့ပြီးသော၎င်းတို့၏နဝမရာသီအများအပြားဖြစ်စဉ်များ, ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာနေထိုင်ကြသည်။ virtuoso ဂစ်တာသမား, အဆိုတော်နှင့်တေးရေးဆရာဂယ်ရီ Clark ကဂျူနီယာပါဝင်သည်သောဖြစ်စဉ်များ, Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4Ks နှင့် Micro စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks, URSA ထုတ်လွှင့်သုံးပြီးပစ်ခတ်ကာ ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို 4K တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ကိုသုံးပြီး switched ခဲ့ကြသည်။
"တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ" မှ Country ဂီတဆုချီးမြှင့်ဆုရရှိသူရော့ခ် icon များနှင့် Keith Urban, ကားလို့စ် Santana, စတီဗင် Tyler, Miranda လမ်းဘတ်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်ပေါင်းစုံပလက်တီနမ်ရောင်းသူ၏ဂရမ်မီ, ကျေးလက်ဂီတအစည်းအရုံး, အမေရိကန်ဂီတနဲ့အကယ်ဒမီတစ်ဦးအမျိုးစုံရရောနှောမီးမောင်းထိုးပြ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနာရီတာရှည်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပရိသတ်ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ရိုက်ချက်အဖြစ်အနုပညာရှင်ကိုသူတို့ဂီတနောက်ကွယ်မှဇာတ်လမ်းများကိုပြောပြအတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအင်တာဗျူးပါရှိပါတယ်။
ယင်းကို သုံး. ဖြစ်စဉ်များ Blackmagic ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းအသွားအလာနယူးယောက်အခြေစိုက်ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ LCM247 ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရှိကျေးရွာအသံဖမ်းစတူဒီယိုမှာတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသော Los Angeles မြို့, LCM247 တဦးတည်းဇာတ်စင်ပေါ်တွင်လက်ကိုင်နှင့်နေရာတဝိုက်နှင့်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ 24 ပေ။ jib နှင့်ရှစ် Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks အပေါ်အကြံအဖန်အခြားနဲ့အတူနှစ်ခု URSA ထုတ်လွှင့်အတူဂယ်ရီ Clark ကဂျူနီယာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပစ်သတ်။
"တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးသည့်အခါအကောင်းတစ်ထုတ်လွှင့်မှန်ဘီလူးနဲ့ URSA အသံလွှင့်များ၏ Ergonomics ဟာအစာရှောင်ခြင်းပွေးညီပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့လက်ကိုင်ရိုက်ချက်များကယ်နှုတ်တော်မူ၏," ပက်ထရစ် Heaphy, LCM247 ရဲ့ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာနှင့်ဇာတ်လမ်းပိုင်းကို၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "ဒီ jib အော်ပရေတာကိုလည်းအကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်အပြည့်အဝထုတ်လွှင့် zoom မှန်ဘီလူးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
"ဒီမိုက်ခရိုစတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks '' အရွယ်အစားအဖြစ်နေရာပတ်လည်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်သူတို့ကိုထားရန်လွယ်ကူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျနော်တို့စည်ကိရိယာအစုံပေါ်တဦးတည်း, သော့အပေါ်တဦးတည်း, တပြင်လုံးကိုစင်မြင့်၏အထွေထွေကျယ်ပြန့်ရိုက်ချက်, ကျင်းပမဲ့နေရာတဝိုက်ကိုချွတ်သော့ခတ်စုံတွဲတစ်တွဲခဲ့, ကြှနျုပျတို့ပင်တစ်ဗီဒီယိုနှင့်အတူအကြံအဖန်တဦးတည်းကို အသုံးပြု. ကင်မရာအော်ပရေတာ 4K မော်နီတာ / အသံဖမ်းနှင့် Assist ခဲ့သည် backup တစ်ခုရိုက်ချက်နေသမျှကာလပတ်လုံးမှန်ဘီလူး "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "ဟုအဆိုပါ ATEM ကင်မရာ Control Panel ထဲကနေတဆင့်အဝေးမှမှာသူတို့ကို dial နိုင်ဖြစ်ခြင်းကျနော်တို့ကန့်သတ်အမှုထမ်းခဲ့လည်းတိုက်ရိုက်လွှင့်ခဲ့ကြစဉ်ကတည်းကအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ "
တစ်ဦး ATEM ကင်မရာ Control Panel ထဲကလည်း HyperDeck စတူဒီယို Mini ကိုအသံဖမျး, Blackmagic က်ဘ်တင်ဆက်မှုများနှင့်တစ်ဦး SmartScope Duo 4K မော်နီတာ, အ ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို 12K, HyperDeck စတူဒီယို Pro ကို, HyperDeck စတူဒီယို 4G သျောကြောင်းဗီဒီယိုရွာ၌တည်ရှိသောခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကတိုက်ရိုက်လွှ switching များအတွက် ATEM သုံးခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းက ISO စင်ကြယ်စာကျွေးခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ် feed ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူ, အ HyperDecks မှမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်," Heaphy မှတ်ချက်ချသည်။ "ကျနော်တို့ထို့နောက် Facebook မှာတိုက်ရိုက်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် stream နထေိုငျဖို့ Blackmagic Web ကိုပစ္စုပ္ပန်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ "
မတိုင်မီကစွမ်းဆောင်ရည်ရန်, Heaphy နဲ့သူ့အဖွဲ့ဒါဟာအကြီးပုံစံအချက်ရှိပါတယ်နှင့် lowlight စွမ်းရည်အကြီးဖြစ်ပါသည်, မဖော်ပြသည့် MFT တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဆင်နယ်အသင်း compliments "ဂယ်ရီ Clark ကဂျူနီယာနှင့်အတူထိုင်အင်တာဗျူးရိုက်ကူးဖို့သုံး Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4Ks ကိုအသုံးပြု MFT မှန်ဘီလူးများနှင့် XLR input ကို DSLR ကင်မရာထက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကင်မရာပိုမိုလွယ်ကူစေသည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒီ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလည်းသင်ကတကယ်ကြည့်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ "
အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲ edited နှင့်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော DaVinci အတွက်စတူဒီယိုဖြေရှင်းနှင့် Heaphy ကိုလည်း DaVinci ၏အသုံးပြုမှုကို Mini ကို Panel ကို၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုးကားဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ "DaVinci ဖြေရှင်းစတူဒီယိုကယ့်ကိုတစ်ခုတည်းဖြတ်ရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်ငါတို့အဘို့အကူးအပြောင်းလွယ်ကူပါတယ်လုပ်ဘာလဲ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ကရှိပြီးသားကျနော်တို့စတူဒီယိုဖြေရှင်း DaVinci အတွက်တန်းသွားခဲ့ကြသည်သိတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စဉ်းစားမိတယ် '' အဘယ်ကြောင့်များလွန်းတည်းဖြတ်ရေးမကြိုးစား? ' ကျနော်တို့က၎င်း၏ပေါင်းစုံကကင်မရာတည်းဖြတ်ရေးစွမ်းရည်အသုံးပြုသွားမည်ကျနော်တို့ပြင်ဆင်ရန်ချိန်ညှိပါလျှင်အခြားအရောင် pass လုပ်ဖို့ရှိခြင်းမဟုတ်သဖြင့်အချိန်အများကြီးကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ ဒါဟာအရောင် tab ကိုမှလှန်ဖို့ချောမွေ့စွာဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုရိုက်ချက်ပြီးသားလိုအပ်အဖြစ်ပေါ်မှာတန်း, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ colorist Dario Bigi ညှိပေးနိုင်ခဲ့သညျ။ "
"ကျနော်တို့ထိုနည်းတူအဆင်ပြေခဲ့ SDR နှင့် HDR 'passes ဘို့တ tool ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်ဖြစ်ခြင်း, မျိုးစုံ Deliverable ခဲ့," Heaphy ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ "ပို့စ်တွင်အဆိုပါဆောင်ပုဒ်ကျိန်းသေထိရောက်မှုကြီးနှင့်မဆိုအသစ်ကပလက်ဖောင်းနဲ့သင်ယူမှုကွေးအမြဲရှိစဉ်အခါ, DaVinci စတူဒီယိုကညာဘက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဖြေရှင်း။ ဒါဟာအယ်ဒီတာများနှင့် colorists ရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုမှသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ "
Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K, URSA အသံလွှင့်, Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4K ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယို 4K, ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို 4K, ATEM ကင်မရာ Control Panel ထဲက, Blackmagic က်ဘ်တင်ဆက်မှု, HyperDeck စတူဒီယို Pro ကို, HyperDeck စတူဒီယို 12G, HyperDeck စတူဒီယို Mini ကို, SmartScope Duo 4K Assist , DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်း, DaVinci Mini ကို Panel ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အခြားဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ Blackmagic ဒီဇိုင်း Blackmagic ဒီဇိုင်းက Ultra HD ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တည်းဖြတ်ခြင်း တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HDR isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2019-08-13
ယခင်: Dejero Challenge အခြေအနေများအတွက်ချိတ်ဆက် IRONMAN သြစတြေးလျသိမ်းထားပြီး
နောက်တစ်ခု: ပြကွက်တွင် podcast လပ်ြရြားမြ 2019